XOG DEG DEG AH+AKHRISO: Waa maxay Ujeedada loo magacaabay Taliye ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed ah oo ka soo jeeda Galmudug? | Www.tusmo.net
XOG DEG DEG AH+AKHRISO: Waa maxay Ujeedada loo magacaabay Taliye ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed ah oo ka soo jeeda Galmudug?
MUQDISHO(P-TIMES)- Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo fulinaya mid kamid ah qorshayaasha ay soo jeediyeen Saaxiibadiisa ka soo horjeeda dawlad gobaleedyada dalka ayaa magacaabay si deg deg ah Taliyaha ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo loo magacaabay sarkaal ka soo jeeda Koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Raysalwasaaraha ayaa u magacaabay Col, Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod taliyaha KMG ah ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana magacaabidiisan ay ka dambeysay markii cadaadisyo xoog leh lagu saaray sidaas taliyihii horre ee ciidamada Soomaaliya.
Warar hoose oo ay heshay goor dhaw Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in magacaabida Col, Gorod ay ahayd qorshe ay ka shaqeeyeen dhinacyada Siyaasadda ee Muqdisho, waxayna doorkoodu yahay sidii ay u fulin lahaayeen qorshayaashooda ay ka leeyihiin Galmudug.
Col, Gorod ayaan si wanaagsan looga dhex aqoon ciidamada dawladda faderaalka ee Soomaaliya, waxaana uu ahaa Duuliye sare oo katirsanaa ciidamadii Difaaca, laakiin sannadyadii burburka qeyb ka noqday Xukuumadii Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Magacaabida deg deg ah iyo talaabooyinka siyaasadeed ee socda ayaa halis galinaya daganaanshaha guud ee Soomaaliya, waxaana aan la garan karin nooca dagaal ee hadda socda halka uu ku dambey doono, xili Raysalwasaare Kheyre iyo Kooxdiisu ku mashquulsan tahay qorshe halis ah.